के चुरोट नखानेलाई पनि यसको धुवाँले असर गर्छ ? « Canada Nepal
के चुरोट नखानेलाई पनि यसको धुवाँले असर गर्छ ?
यात्रामा हुदाँ, पार्कमा डुल्दा वा होटलमा खाजा खाँदा धेरै पटक आसपासका मानिसले बुङबुङ चुरोट पिएको देखेका छौं । यस्तो अवस्थामा केहि सिमितले चुरोट नखान अनुरोध गरे पनि अधिकांशले यसमा आपत्ती जनाउँदैनन् । बरु चुरोटको धुँवाबाट बच्न रुमालले मुख छोप्न वा रुमाल, कागजले हम्कन थाल्छन् । यस्तोमा धेरैलाई आफूले नखाएको चुरोटको धुवाँले असर गर्दैन भन्ने लाग्छ । तर वास्तवमा त्यस्तो हुँदैन ।
धुम्रपानका अम्मलीले धुम्रपान गर्न रोकेको घण्टौंसम्म हावामा वा वरिपरिका वातावरणमा चुरोटका धुँवामा हुने हज्जारौं विषालु रसायनहरुको असर र प्रभाव रहिरहन्छ । त्यस्ता विषालु पदार्थ धुवाको रुपमा मात्र हैन, खरानी वा अन्य विभिन्न कणहरुका रुपमा समेत धुम्रपान गर्ने व्यक्तिका साथसाथै नजिक रहेका व्यक्तिको कपाल, छाला, कपडा, भित्ता, कार्पेट, फर्निचर लगायतका वस्तुहरुमा निक्कै लामो समयसम्म टाँस्सिएर रहेका हुन्छन् ।
यही कारण नै घण्टौंपछि धुम्रपान गरेको कोठामा पस्दा ह्वास्स चुरोट गन्हाउँछ । त्यसैले कसैले तत्काल चुरोट खाइरहेको छैन तर केही समय पहिले खाएको छ भने पनि त्यसको दुस्प्रभावबाट बच्न सकिँदैन । अझ बच्चा तथा केटाकेटीमा यसको असर बढि हुन्छ ।
आफू चुरोट बिँडी नखाने मानिसलाई समेत छेउछाउमा कसैले खान्छ भने त्यसको असर पर्दछ । चुरोट खानेलाई त यसले असर गर्छ नै साथसाथै, नखाने मानिसलाई पनि असर पर्दछ । यसको असरले गम्भिर बिरामी वा मृत्युसम्मको जोखिम हुनसक्छ । त्यसैले आसपासमा कसैले चुरोट पिउँदैछ भने यसको धुवाँबाट बच्न आवश्यक छ ।
प्रकाशित मिति : बैशाख २७, २०७९ मंगलबार ७ : ५९ बजे
अनार खानु स्वास्थ्यका लागि फाइदै फाइदा
रजस्वला हुँदा देखिने समस्याहरुबाट बच्ने घरेलु उपचार विधि
फर्सी खानु स्वास्थ्यका लागि फाइदै फाइदा
धनुरासन योगाबाट हुने लाभ
यस्ता छन् पायल्सदेखि एसीडिटीसम्म सहयाेग पुग्ने मरिच सेवनका लाभहरु
बालबालिकामा ओच्छ्यानमा पिसाब फेर्ने समस्या छ ?